अखाद्य पदार्थ मिसाउनेलाई छोडिन्नँ : कृषिमन्त्री खनाल
काठमाडौँ २३ असोज । कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले खाद्य पदार्थमा मिसावट गर्ने जो कोहीलाई पनि कडा कारवाही गर्ने दृढता व्यक्त गरेका छन् ।
उनले भने, “खाद्य पदार्थमा मिसावट गर्नेलाई कानूनअनुसार कारवाही हुन्छ, हदैसम्मको कारवाही गर्न सरकार तत्पर छ । वर्षभरि नै दूध, तेल र पानीमा स्वच्छता अभियान सञ्चालन गरिएको छ ।”
मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित ‘समृद्धिका लागि सहकार्य, कृषि क्षेत्रको विकास अपरिहार्य’ विषयक विचार गोष्ठीमा मन्त्री खनालले जनताको स्वास्थ्य माथि खेलबाड गर्ने छुट कसैलाई नभएको बताए ।
मुख्य शहरमध्ये झण्डै ५० लाख मान्छेको बसोबास भएको काठमाडौँमा अखाद्य वस्तुको मिसावट सबैभन्दा बढी हुने गरेको उनको भनाइ छ । अनुगमन र कडाइपछि अहिले दूध ढुक्कले खान मिल्ने अवस्थामा पु-याएको भन्दै मन्त्री खनालले तेल, पानी र मासुमा भने अझै सुधार नभएको बताए ।
“अहिले नै म पानी, तेल र मासु ढुक्कले खानुस् भन्न सक्ने अवस्थामा छैन”, मन्त्री खनालले भने, “राज्यले नियमन गर्ने संयन्त्रको विकास नै गर्न सकेको रहेनछ । तर केही समयपछि नै खान मिल्ने बनाइन्छ, अखाद्य वस्तु मिसावट गर्ने सबैलाई जेल हालिन्छ ।” अनुगमन गर्दा खान नमिल्ने पानी बेच्ने २२ वटा पानी उद्योगमा तालाबन्दी गरिएको पनि मन्त्री खनालले जानकारी दिए ।
यस्तै उनले हाल कृषि क्षेत्रको अवस्था दयनीय भएको पनि बताए । दुई करोड ८० लाखको दुई तिहाइ अर्थात् झण्डै ६५ प्रतिशत मानिसले खेती गर्ने कृषि क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको बजेट, सरकार र नेताहरुको प्राथमिकता आदि कारणले कृषि क्षेत्रको अवस्था दयनीय भएको उनको भनाइ छ ।
“सामान्य गमलामा छर्केको भरमा आफूलाई पुग्ने धनियाँ उत्पादन गर्न सकिन्छ”, मन्त्री खनालले भने, “तर हामी वार्षिक रु. १३ करोडको धनियाँ विदेशबाट आयात गर्छौं ।” त्यस्तै रु. एक खर्ब २५ अर्बको धान चामल आयात हुने गरेको छ ।
“कृषि प्राथमिकतामा परेन, यसलाई उल्टाउनुपर्छ, उल्टोबाट सुल्टो बाटोमा ल्याउनुपर्छ ।” खनालले भने, “त्यसका लागि सरकारको सोचाइ बद्लिनुपर्छ, मन्त्रालयले केही राम्रा कार्यक्रम पनि ल्याएको छ ।”